Hargeysa: Ciidamada amaanka oo hoteelo u dhacay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hargeysa: Ciidamada amaanka oo hoteelo u dhacay
Mareeg.com: Ciidanka Laanta Socdaalka Somaliland ayaa xalay baadhis ku sameeyay Hoteelada la seexdo ee magaalada Hargeysa.
Hawl galkan oo ahaa mid kedis ah islamarkaana aan hore uga dhicin magaalada ayaa la sheegay in uu la xidhiidho arimo dhinaca amaanka ah iyo tuhuno laga qabo dadka Socotada ah.
Taliyaha Laanta Socdaalka Somaliland Col. Maxamed Cali Yuusuf (Ina Cambaro), ayaa Wargeyska Jamhuuriya u xaqiijiyey in ciidankiisu u baxeen xalay fiidkii hawlgal lagu baarayo dadka seexda hoteelada hurdada ee magaalada Hargeysa, balse taliyuhu wax tafaasiil ah kama bixin ujeeddada hawlgalladaas.
Hawlgalkan oo bilaamay ilaa todobadii iyo barkii fiidnimo ee xalay islamarkaana socday ilaa saqdii dhexe ayaa si adag loogu baaray dadka socotada ah ee seexda hoteelada, iyadoo qof kasta la waydiinayay aqoonsigiisa iyo sifaha sharciga ah ee uu dalka ku joogo.
Ilaa hadda si cad looma oga natiijada ay ku dhammaadeen hawlgalladaas oo ah kuwii ugu horreeyey noocooda ee ciidammada socdaalku xilli habeennimo ah ka fuliyaan hudheellada la seexdo ee magaalooyinka Somaliland.
← Kay iyo Gaas oo ku wada hadlay Garowe → Kolonyada gudoomiyaha Hiiraan oo la weeraray